Dhismaha dhismaha oo ka baxsan dhismaha
Faa'iidooyinka dhismaha qaab-dhismeed ee dhismaha ah ee warshadaha guryaha
Abuuraan meesha xirfadaha jira ama la abuuri karo
Halkii laga heli lahaa xirfadaha lagu helo ama lagu soo wareejiyo hoyga waddanka, waxay u baahan yihiin in la sameeyo meel dhexe si ay u shaqeeyaan oo u shaqeeyaan.
Helitaanka goobo yar oo wadanka oo dhan ah
Nidaamka dhismaha waa in la qaataa kaas oo ka dhigaya horumarinta xitaa hal guri oo faa'iido leh oo kharashkuna wax ku ool yahay, meesha boqolaal ka mid ah xajmiga goobaha yaryar ee u dhaxeeya 1 iyo in la yidhaahdo 30 guryaha la dhisi karo waa xalka. Tani waxay si fudud u fududeyneysaa oo ay dhaqaajin doontaa geedi socodka qorsheynta iyo goob kasta oo si dhaqso ah loo horumarin karo.
Hababka dhismaha ee waxtar leh
Waa inaanu farsamooyinka line-ka wax soo saarka ee Henry Ford u dejinnaa guryaha oo keenaya hagaajinta dhaqaalaha, saadka iyo wakhtiga horumarinta ee xakameynaya logjam. Waxtarkaasi waxay sidoo kale hoos u dhigi doonaan qiimaha cutubka si ay u noqoto meel ay mar labaad u heli karaan guryaha.
Qalab kala duwan oo loo adeegsaday
Sida lagu xusay ka hor inta lebenkii iyo lakabka ay leeyihiin guryaha kuleylka aad u firfircoon, waxaa jira macno ahaan boqolaal dhamaad ah oo la heli karo maanta oo bixiya waxtarka ugu sarreeya kuleylka iyo qabowga.